InstaZoom - Mepụta foto profaịlụ nke Instagram na HD zuru ezu
InstaZOOM - Mepụta foto profaịlụ nke Instagram
Lelee ma budata foto profaịlụ Instagram na ogo HD kachasị elu.
Budata Insta DP na ndị ọzọ
Jiri ngwa nbudata Instagram anyị ka idobe oge kacha mma na ngwaọrụ gị ruo mgbe ebighị ebi
Vidiyo nke Instagram
Ọ bụ Instazoom?
Instagram bụ usoro mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nwere ihe karịrị nde 600 na-arụsi ọrụ ike. Instazoom bụ ihe nlele Instagram izizi n'ụwa na-enye gị ohere ilele foto profaịlụ zuru oke, budata ha na ndị ọzọ. Instazoom bụ ọrụ ịntanetị na-egosiputa foto ọ bụla na akaụntụ onye ọrụ ọ bụla n'ụdị buru ibu na-ahapụghị windo ihe nchọgharị gị.
Oke na nlele Instadp
Instadp adịla kemgbe ogologo oge ma ọ gaghị apụ n'ọdịnihu ma. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ foto profaịlụ mmadụ n'uju? Instagram na-amachi nhọrọ a, agbanyeghị Instazoom ọ bụghị! Insta mbugharị na-enye ụzọ ọzọ maka nlele amachibidoro na Instagram, na-enye gị ohere ibugharị profaịlụ Instagram mbugharị nke ndị ọrụ ọkacha mmasị gị na-enweghị mgbochi ma ọ bụ oke. Instazoom na-enye gị ohere ịnweta akụkụ niile nke ihe Instadp- Akaụntụ mmadụ.
ngwa nke Instazoom na ndu?
Ịmata ndị mmadụ na foto: Foto profaịlụ nke Instagram nwere mkpebi dị ala, nke nwere ike ime ka ọ sie ike ịmata ndị mmadụ na foto. ya na Instazoom ị nwere ike ịhụ foto profaịlụ nke Instagram ka ebugoro yana na mkpebi dị elu, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịmata ndị enyi na ezinụlọ ha.
Ị nwere ike ịmata ma foto profaịlụ ọ dị adị site na iji ya tụnyere foto onye ọzọ ziri ezi.
Detuo foto profaịlụ ọhụrụ gị wee mado ya na ngwaọrụ nkeonwe gị: ị nwere ike budata foto a wee chekwaa ya na gallery gị maka ikiri ma emechaa, ma ọ bụ jiri ya dị ka akwụkwọ ahụaja na ekwentị gị ma ọ bụ kọmputa.
Ị nwetala arịrịọ dị iche iche na Instagram site n'aka ndị ọbịbịa zuru oke? Tupu i kpebie n'obi, chebara ma è bu ezi ihe ma ọ bụ ihe ọjọọ mere ya.
Ojiji na-akparaghị ókè - Instazoom enwere ike iji ya mee ihe dị iche iche.
Nke a bụ ihe merenụ Instazoom?
Instazoom dabere na aha profaịlụ gị ma ọ bụ url profaịlụ ọha ma ọ bụ onye nọ na Instagram maka foto. Instazoom Bulie onyonyo Instagram ka imepụta onyonyo kacha mma.
Site na iji Insta Zoom, ị nwere ike ibugharị ngwa ngwa na profaịlụ Insta wee buru foto profaịlụ ndị ọrụ Instagram ndị ọzọ. Insta Zoom na-enyere gị aka ịhazi foto profaịlụ Insta gị na ogo HD.
Otu esi emewanye ma ọ bụ budata foto profaịlụ Instagram na ya Instazoom?
Nzọụkwụ 1: Gaa leta ibe anyị na: www.instazoom.mobi
Nzọụkwụ 2: Tinye url Instagram ma ọ bụ aha njirimara n'ime igbe ọchụchọ na webụsaịtị wee pịa bọtịnụ "ZOOM".
Nzọụkwụ 3: Mgbe nsonaazụ ya pụta, ị nwere ike pịa bọtịnụ nlele zoo ka ịhụ foto profaịlụ Instagram ebugoro ibu n'ogo kacha mma.
Nzọụkwụ 4: Pịa bọtịnụ nbudata ka ibudata foto profaịlụ gị n'ịdị mma kachasị elu.
Ajụjụ InstaZoom - InstaDp
Istar Instazoom n'iwu?
Instazoom bụ iwu zuru oke ka a na-ekesa profaịlụ Instagram n'ihu ọha. Instazoom- Ya mere, ndị ọrụ bụ kpamkpam iwu.
Istar Instazoom a software?
Ọ bụghị! Instazoom bụ webụsaịtị na-enye gị ohere ịlele na budata foto profaịlụ Instagram kacha mma.
Kedu ka m ga-esi budata foto profaịlụ Instagram na kọmputa?
Instazoom na-arụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ ọ bụla. Ị nwere ike www.Instazoom.Mobi gaa na ibudata foto profaịlụ Instagram kacha mma maka PC gị.
Kedu ihe onyonyo profaịlụ Instagram na-abawanye - insta zoom?
Otu a ka o si arụ ọrụ Instazoom n'ezie. Ọtụtụ mgbe, Instagram anaghị enye gị ohere igosipụta foto profaịlụ kacha mma. Instazoom emebere ya ka ọ gbasaa na melite foto profaịlụ Instagram kacha mma maka ikiri na nbudata.
Enwere m ike ịlele akaụntụ na-amaghị aha ya kpatara ya?
Ọ bụghị! Anyị na-ahapụ naanị ndị ọrụ ka ha jiri Instazoom na akaụntụ Instagram ọha.
Istar Instazoom n'efu?
Instazoom bụ kpam kpam free. Anyị anaghị akwụ ụgwọ ọzọ ọ bụla. I nwekwara ike Instazoom iji obi iru ala zuru oke.
Nhọrọ na iZoomYou?
Ọtụtụ iZoomỊ nọ n'ahịa anaghịzi arụ ọrụ ma ọ bụ anaghị akwụsi ike, nbudata onyonyo dị ala. InstaZoom otu a bụ ụzọ kachasị mma maka iZoomYou iji lelee ozi na budata foto profaịlụ Instagram kacha mma.
Nhọrọ maka Izuum?
Weebụsaịtị Izuum DB anaghịzi arụ ọrụ. Instazoom otu a bụ ngwa kachasị mma iji dochie Izuum iji gbasaa foto profaịlụ Instagram na mma kacha mma.
Hat Instazoom ndọtị?
Ee ị nwere ike ịhụ ya Instazoom- Mgbatị na ụlọ ahịa tinye-ons nke Chrome- na Firefox-Nchọgharị.
Kedu ka o si arụ ọrụ Instazoom- Mgbatị?
Ị nwere ike na-ekiri a video nkuzi n'okpuru otú iji Instazoom-Lee ndọtị: